बजेट भाषण गर्दा कति पैसा पाउँछन् ? -अर्थमन्त्रीले – www.agnijwala.com
बजेट भाषण गर्दा कति पैसा पाउँछन् ? -अर्थमन्त्रीले
काठमाडौं । अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट भाषण गरेवापत कति रुपैयाँ पाउलान् ? तपाईहरुको अनुमान हुन सक्छ, एक लाख या दुई लाखसम्म अर्थमन्त्रीलाई आम्दानी हुन सक्ला ?
यस्तै हल्ला सुनेकी एकजना पूर्वअर्थमन्त्रीकी पत्नीले आफ्ना पतिसँग बजेट भाषण पढेवापतको पैसा मागेको रहस्य खुलेको थियो । खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले बजेट भाषणपछि आफ्नी पत्नीलाई प्रष्टीकरण दिनुपरेको हल्ला संचार माध्यममा नएका होइनन् ।
‘बजेट पढेको पारिश्रमिक खै भनेर मेरो परिवारमा पनि प्रश्न सोधियो’ पूर्वमन्त्री कोइरालाले भने-‘अर्थमन्त्रीले बजेट पढेको पारिश्रमिक लिने चलन छैन’ उनले भने -पहिले पनि लिने चलन थिएन, हल्लामात्रै चलेको हो ।’
तत्कालीन नेकपा माओवादीको सरकार हुँदा (प्रचण्डको सकारका पालामा) अर्थमन्त्री बनेका डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्दा कुनै पनि रकम नपाउने बताउँछन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी पनि संसदमा बजेट भाषण पढेवापत एक पैसा नपाइने गरेको आफ्नो अनुभव सुनाउँछन् । ‘अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्य दिँदा एक लाखदेखि दुईलाखसम्म भत्ता पाउँछन् भन्ने हल्ला मेरो पालामा पनि चलेको थियो,’ पूर्वअर्थमन्त्री अधिकारीले भने, ‘मैले बजेट पढ्दा एक पैसा लिएको छैन । अर्थमन्त्रीले पैसा पाउँछ भन्ने हल्लामात्रै हो ।’
पञ्चायतकालमा राजाले अर्थमन्त्रीलाई बक्सिस दिने गरेको भए आफूलाई त्यसबारे थाहा नभएको तर संसदीय लोकतन्त्रमा कुनै पनि अर्थमन्त्रीलाई त्यसरी भत्ता दिने चलन नरेको अधिकारीले बताए ।